Libia: Lalao Baolina Kitra Voalohany Nandreseny amin’ny maha-Firenena Malalaka azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2011 9:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, polski, عربي, srpski, Italiano, English
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny Fikomian'i Libya 2011 ity lahatsoratra ity.
@IbnOmar2005: VITA NY LALAO! NANDRESY NY LALAO VOALOHANY AMIN'NY MAHA-FIRENENA MALALAKA AZY I #LIBIA!
@ChangeInLibya: Sarotra inoana ny fahenoako mpitsikera iray ao amin'ny TV Libia manonona ny anaran'ireo mpilalao baolina kitra – izay tsy nanara-dalàna 100% teo anatrehan'i Gaddafi lol #libya
@ChangeInLibya: Ny ankamaroan'ireo mpilalao Libiana izay nandresy an'i Mozambika androany no lohan'ireo nifanandrina tamin'ny herin'i Gaddafi vao herinandro vitsy lasa izay #libya
@IbnOmar2005: fianakaviana #Libyan iray mijery ny lalao any #Tripoli. Raha izaho izy ireo dia mety nitifitra kely ny fahitalavitra aho lol yfrog.com/nybqosj
@libya_Horra: Vao avy niantso namana tany #Tripoli aho, nilaza izy fa ambony ambany ny tanàna noho ireo fankalazana, ireo karazana tifitifitra fankalazana rehetra, mety hampihevitra anao hoe niverina ny ady.
@flyingbirdies: Mila afomanga isika amin'izao fotoana izao. miangavy ny tsy hisian'ny tifitifitra fankalazana intsony 🙁 #Libya #football
@kelvinbrownnews: lasa adala noho ny hafaliana i Benghazi satria nandresy an'i Mozambika tamin'ny fifantenana ireo firenena hiady ny amboara i Libia
@TristanAJE: Mifaly havanja i Benghazi taorian'ny fandresen'ny ekipa #libya mpilalao baolina kitra tany Kairo. Mitondrà aroloha raha hivoaka ianao androany alina: betsaka ny hiraradraraka eny manodidina eny.
Septimius-sever miteny fa na i Gaddafi aza dia tsy te-ho tara amin'ity fety ao Tripoli ity ka mamoaka ity sary ity:
@ShababLibya: Tsy maintsy mandresy an'i Zambia i Libia amin'ny volana ho avy mba hahazoana toerana amin'ny Fiadiana ny Tompon-dakan'i Afrika 2012 #Libya.
Ampahany amin'ny fandrakofana manookana ny Fikomian'i Libia 2011 ity lahatsoratra ity.